Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Turkey na Russia ga-enwe mkparịta ụka na Antalya maka njem na njem mgbochi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
Turkey na Russia ga-enwe mkparịta ụka maka njem na njem mgbochi
Russia na-egbochi ọrụ ikuku na Turkey mgbe niile, na-ekwu na ọ bụ naanị maka ntiwapụ ọhụrụ COVID-19 ebe ahụ
Site na Eprel 15 ruo June 1, Russia na-egbochi ọrụ ikuku na Turkey
Mgbochi ụgbọ elu enweghị ihe ọ bụla metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Kremlin na-ekwu
Otu ndị ọkachamara Russia-Turkish na nchekwa njem iji zute Antalya
Dabere na onye nnọchi anya Turkey na Russia Mehmet Samsar, Ankara agwala Kremlin ka ọ gaa nzukọ nke otu ndị ọkachamara Russia-Turkish maka nchekwa nchekwa njem Antalya na ọkara nke abụọ nke May iji gosipụta usoro nchekwa na nkwalite nke ndị ọchịchị Turkey mere.
“N’izu gara aga, anyị zigara akwụkwọ ịkpọ oku anyị na nzukọ nke ndị otu ọrụ Turkish-Russia na-arụ ọrụ na nchekwa nchekwa njem nke emere atụmatụ maka Eprel mana e yigharịrị ya, na-atụ aro ijide ya na ọkara nke abụọ nke Mee na Antalya ka ndị ọchịchị Russia pụrụ ịhụ usoro emere ma enweghị nsogbu ọ bụla fọdụrụnụ, ”ka onye nnọchi anya gọọmentị ahụ kwuru.
Site na Eprel 15 ruo June 1, Russia na-egbochi ọrụ ikuku na Turkey 'n'ihi ọrịa coronavirus ọhụrụ ebe ahụ.' Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu belatara abụọ kwa izu na mgbakwunye.
Kremlin na-agọnahụ ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mkpebi Russia igbochi ụgbọ elu na-aga Turkey. Mkpebi Russia igbochi ụgbọ elu ndị njem na Turkey enweghị ihe ọ bụla metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ naanị 'mkpesa na ikpe COVID-19' na-akpali ya na mba ahụ, ka ọnụ na-ekwuchitere Kremlin Dmitry Peskov kwuru.
"Ee e, ọ dịghị [nwere ihe ọ pụtara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị]," ka onye ọrụ Kremlin kwuru mgbe a jụrụ ya ma mgbochi ndị ahụ nwere ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọkachasị nke metụtara okwu ndị a na-adịbeghị anya nke onye isi ala Turkey bụ Recep Tayyip Erdogan na okwu Ukraine.
"Ọnọdụ ahụ bụ naanị ọrịa na-efe efe," Peskov kwupụtara.